« Satriko anio dia anio ihany dia hatolotra ny Fitsarana ireo polisy voarohirohy ireo, saingy miankina amin’ny komity manokana manao fanadihadiana izany », hoy ity minisitra ity.
Omaly vao maraina tamin’ny 4 ora no tonga teto Antananarivo ireo polisy 11 voatonontonona tamin’ny famonoana ny mpitsara Rehavana Michel tany Toliara. « Tokony ho 12 tokoa ireo polisy nampiakarina aty. Vehivavy anefa ilay polisy iray ary vao avy nodidiana fo ka atahorana sao mihetsika eny an-dalana ny aretiny. Na izany aza, hiakatra aty izy miaraka amin’ireo namany hafa tsy tao an-toerana tamin’ny fisamborana », hoy ihany ity tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny polisim-pirenena ity.
Mikasika ny fametraham-pialana na ny mety ho fanesorana azy dia tsy nametraka olana firy ny amin’izany ny minisitry ny Filaminana anatiny.
« Afaka miala aho raha toa ka manala ahy ny Praiminisitra sy ny Filohan’ny tetezamita izay nametraka ahy teo. Rehefa tsy mety ny atao dia anjaran’izy ireo no mandray fepetra. Ny azoko lazaina dia ampahany vitsy teo anivon’ny polisim-pirenena no nanao hadalana ka tsy tokony hafangaro amin’ny polisy rehetra », hoy izy.
Nohamafisiny fa tsy maintsy hisy ny sazy homena ireo polisy nihoa-pefy eo anivon’ny polisy, ankoatra ny ara-pitsarana ary mety hiafara amin’ny fandroahana tsy ho polisy intsony izany.